Ôrdônansy (Olomasin'ny andro farany) - Wikipedia
Ôrdônansy (Olomasin'ny andro farany)
Ao amin' ireo fikambanana na fihetsiketsehana nipoitra avy amin' ny môrmônisma, ny teny hoe ôrdônansy dia ampiasaina hanondroana ny fanao sy fombafomba masina izay manana heviny ara-panahy sy ara-tandindona/ara-panoharana sady miasa toy ny fitaovana ampitana ny fahasoavan' Andriamanitra. Ny ôrdônansy dia fihetsika na asa hita maso sy azo tsapain-tanana izay midika na manandindona asa ara-panahy; ho an' ny ôrdônansy sasany dia fahatanterahan' ny asa ara-panahin' ny fanekem-pihavanana eo amin' ny mpandray ny ôrdônansy sy Andriamanitra.
Ny ôrdônansy dia tanterahina mandrakariva amin' ny alalan' ny fahefan' ny fisoronan' ny Olomasin' ny Andro Farany sy amin' ny anaran' i Jesoa Kristy. Ny fampiasan' ny Olomasin' ny Andro Farany ny teny hoe "ôrdônansy" dia tsy mitovy amin' ny fampiasana izany teny izany ao amin' ireo sampana hafan' ny fivavahana kristiana izay mampiasa ny teny hoe "ôrdônansa" na "ôrdônansy" ho enti-milaza fa ilay asa dia am-panoharana sady tsy mampita fahasoavana. Ny fampiasan' ny Olomasin' ny Andro Farany ny teny hoe "ôrdônansy" dia mitondra hevitra mitovy amin' ny teny hoe "sakramenta" ampiasain' ny fiangonana kristiana hafa. Ny Fiangonan' i Kristy, izay nipoitra avy amin' ny fikambanan' ny Olomasin' ny Andro Farany, dia mampiasa ny teny hoe "sakramenta" fa tsy "ôrdônansy".
Ny ôrdônansy sasany toy ny batisa sy ny kônfirmasiôna (fandraisana ho mpikambana) ary ny sakramenta (fanasan'ny Tompo) dia mitovy amin' izay tanterahin' ny fiangonana kristiana hafa sasany. Ireo ôrdônansy hafa an' ny Olomasin' ny Andro Farany dia azy manokana sady tanterahina ao amin' ny Tempolin' ny Olomasin' ny Andro Farany. Ireo ôrdônansy ireo dia ahitana ny "fanafiana masina" sy ny "famehezana".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ôrdônansy_(Olomasin%27ny_andro_farany)&oldid=1011033"
Dernière modification le 26 Aprily 2021, à 11:02
Voaova farany tamin'ny 26 Aprily 2021 amin'ny 11:02 ity pejy ity.